Niavaka noho ny tamin'ny taon-dasa ny an-katoky ny fetin'ny asaramanitra ho fahatsiarovana ny faha-53 taon'ny nahazoana ny fahaleovan-tena. Isan-taona dia mifanome tanana amin'ny lehiben'ny Boriborintany I ireo tompon'andraikitry ny fokontany 44. Namalifaly olona miisa 2 000 tany ho any izy ireo tamin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo ka nanolorana vary be menaka ireo olona monina eny amin'ny faritra iva miisa eo amin'ny 2 000 eo teny Andohatapenaka II. Tsy toy ny mahazatra tokoa satria raha tsaramaso no fihinana tany aloha dia nitombo ho henakisoa ny lentan'ny sakafo atoandro.
Nanambara ny lehiben'ny Boriborintany I, Rakotomavo Serge, fa satry hanampy olona foana kanefa tsy azo atao ny mampiankindoha azy ireny. "Raha tsara tantana ny eny anivon'ny fokontany ka mihatsara ny fari-piainan'ny mponina dia tsy hisy intsony ny fahamahanana olona toy izao. Ny resaka fanampiana kosa dia ny fampirisihina ny tsirairay hahay hizara hahazoan'ny hafa mihoatra eo amin'ny fiainana. Raha manana Ar 50 000 ianao na Ar 100 000 dia efa azonao hanosehana ny hafa izany saingy tsy hahafaty azy dia tsy angalana zanany izy rehefa mamerina ny volanao", hoy ny fanazavany.
Misy ny tetikasa andrana eo amin'ny fianakaviana dimy eo. Tolorana vola hanodinany ny asany izy ireo ary rehefa tonga ny fotoana hamerenany izany dia hita fa nivoatra sy nidondrotra ny fiainany. Mpanasa lamba, mpivaro-boanjo ary mpivaro-mangahazo no tena iantefan'ny tohana tao anatin'ny roa volana izay. Tsy ny olon-drehetra akory no mendrika izany tolo-tanana izany fa ireo tsapa fa tena manam-piniavana ny hanohitra ny tsy fananana. "Tsy ny olon-drehetra no afaka mindram-bola ary vao mainka ho sahirana ny mponina raha toa ka angalana antoka. TSy aleo ary ve manome tanana azy hahazoany mivelona amin'ny ara-dalàna ? Ny fahatomomban'ny famerenam-bolany dia ataonay antoka ho azy ka anjarany indray no miteny amin'ny olona hoe raha mila fanampiana ianao dia i Ranona na i Ranona satria ireny no mahay mitantana tsara ka tsy misy ahiana ny aminy", hoy izy namarana.
Tsy mitsahatra ny manentana ny olona hiroso amin'ny fanambadiana faobe, amin'ny fikarakarana kopia nahaterahana sy fanamboarana kara-panondrom-pirenena ho fanamarihana fa tena olom-pirenena manan-jo ny olona iray.